Mpanamboatra sy mpamatsy spry famonoana bibikely any China | Haicheng
Fitarihan-kevitra: biby sperm desinfectant ny biby sy tontolo iainana - famonoana otrikaretina am-pitiavana, famaohana mivantana ho an'ny fampiasana, fanamorana, famonoana otrikaretina, fanesorana fofona, tsy misy fahasosorana na alikaola amin'ny biby fiompy. Ny orinasan-tsika dia afaka manome OEM sy ODM, ny mpanjifa dia afaka misafidy ny karazana tavoahangy sy ny karazana ditin-kazo manitra ary ny famaritana samihafa, 60ml 100ml 120ml 150ml 200ml 250ml 250ml 300ml 500ml 1000ml. fitrandrahana amboadia, fitrandrahana chamomile ary sira amonium quaternary voajanahary ary akora voajanahary hafa, hiantohana ny fiarovana, ny fahombiazana, ny tsy mahazaka. Ny orinasanay dia manana tsipika famenoana ranon-javatra famenoana mandeha ho azy, ny atrik'asa famokarana dia atrikasa madio 100, 000, ny rohy famokarana mba hiantohana ny fahadiovana sy ny fahombiazany ary ny fitoniana kalitao. Ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny fizotran'ny fiompiana biby, ny vatana biby mahazatra ny famafazana ny famonoana otrikaretina, hisorohana ny marary biby, fa koa ny tranom-biby sy ny tain-drorohany fafazana famafazana otrikaina, dia tsy vitan'ny famonoana otrikaretina sy fisorohana ny aretina ary hanala ny fofona. Ny orinasan-tsika manomboka amin'ny akora mankany amin'ny vokatra vita dia fanandramana roa, aorian'ny fanaraha-maso indroa ireo akora efa voafantina dia azo apetraka ao amin'ny trano fitehirizana, aorian'ny fisafoana avo roa heny dia afaka mivoaka amin'ny trano fanatobiana. Ny fitaovana fonosana nofidianay dia ireo fitaovana fonosana mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena mba hiantohana ny fihamafisana sy ny fiarovana ny fizotry ny fitaterana. Miasa mandritra ny 17 taona ny orinasanay, manana mari-pahaizana amin'ny famokarana an-trano izahay ary manome fahazoan-dàlana hamokatra vokatra famonoana otrikaretina, fanamarinana vokatra eto an-toerana sy iraisam-pirenena ary fahatelo - tatitra momba ny fitsapana ny antoko, ary miara-miasa amin'ireo orinasa lehibe any Japon, Hong Kong, Eoropa ary Azia atsimo atsinanana. Manana ekipa mpomba ny fadin-tseranana matihanina izahay, ny toerana ihany koa dia manana ny tombony amin'ny seranan-tsambo, fahazoan-dàlana haingana sy mety. Ny orinasanay dia manana ekipa 24 ora an-tserasera aorian'ny - ekipa serivisy fivarotana hamahana ny olana manaraka - ny serivisy amin'ny varotra amin'ny fotoana rehetra ahazoana antoka fa afa-po ny mpanjifa. Ho an'ny vokatra natokana ho an'ny mpanjifa, ny orinasanay dia mitaky ny mpanjifa handroso mialoha ny fametrahana ary hametraka ny vola sisa tavela amin'ny volavolan-dalàna.
1 FIVORIANA DISINFECTANT PET 50ml / tavoahangy Baoritra / baoritra 12, boaty / baoritra 20, tranga 1000/40 HQ
2 FIVORIANA DISINFECTANT PET 60ml / tavoahangy Baoritra / baoritra 12, boaty / baoritra 20, tranga 1000/40 HQ
3 FIVORIANA DISINFECTANT PET 100ml / tavoahangy Tavoahangy / boaty 6, boaty / baoritra 20, tranga 1000/40 HQ
4 FIVORIANA DISINFECTANT PET 200ml / tavoahangy Tavoahangy / boaty 3, boaty / baoritra 20, tranga 1000/40 HQ
5 FIVORIANA DISINFECTANT PET 500ml / tavoahangy Tavoahangy / boaty 24, tranga 1000/40 HQ
6 FIVORIANA DISINFECTANT PET 1000ml / tavoahangy Tavoahangy / boaty 12, tranga 1000/40 HQ
Fampiharana fampiharana: esory ny fofon'alika sy saka, fofona pad potty ary fofona biby oder
Sava lalana Fanomezana ho an'ny orinasa manokana logo OEM fako isan-karazany milimika bibikely famonoana bibikely mamoaka fofom-biby miompy amin'ny bakteria mba hanafoanana ny fofon'alika sy saka, fofon-tavy ary fofona oder
Karazana fanadiovana spry
Description spry mamono otrikaretina biby
famaritana 60ml 100ml 120ml 150ml 200ml 250ml 300ml 500ml 1000ml
Fampiasana Alefaso ny switch switch, tsindrio ilay switch, ary atsipazo amin'ny faritra rehetra amin'ny vatan'ny biby fiompy sy ny akanin-tsika mandritra ny 10 segondra, manala fofona fanoherana ny bakteria
Votoatin'ny singa mavitrika Fungisialy organika
Fomba fatra Tifitra ranon-javatra
Teo aloha: Sanitiser fanasan-damba
Manaraka: Sakafo mamiratra Chain Cold Chain amin'ny barika